Laser manapaka ny karipetra fiaramanidina ho an'ny indostrian'ny fiaramanidina - Laser laser
Ankoatr'izay, ny karipetra fiaramanidina dia lava be. Ny fanapahana laser no fomba mora indrindra hanapahana karipetra fiaramanidina tsara sy mahomby. Ny tombo-kase Laser dia manisy tombo-kase ny sisin'ny lamba firakofan'ny fiaramanidina, tsy mila manjaitra intsony avy eo, afaka manapaka habe lava be miaraka amin'ny fametrahana mazava tsara, mamonjy ny asa ary malefaka be amin'ny fifanarahana kely sy salantsalany.
Ny latabatra mpampita dia mandroso ny fitaovana amin'ny latabatra fanapahana ho azy, tsy mila fidirana an-tsehatra amin'ny tanana mandritra ny fanapahana, fitsitsiana ny vidin'ny mpiasa.
Fanapahana avo lenta ho an'ny lamina faran'izay lava.
Ny sakan'ny latabatra fanapahana dia 2.1 metatra, ary ny halavan'ny latabatra dia mihoatra ny 11 metatra ny halavany. Amin'ny latabatra X-Long, azonao atao ny manapaka lamina lava lava miaraka amin'ny tifitra iray, tsy mila manapaka ny antsasaky ny lamina ary avy eo mandrindra ny sisa tavela amin'ireo fitaovana. Noho izany, tsy misy banga manjaitra amin'ny sangan'asa noforonin'ity milina ity. Ny famolavolana latabatra X-Long dia mandrindra ny fitaovana amin'ny fomba marina sy mandaitra miaraka amin'ny fotoana fisakafoanana kely.